Hillary oo baaritaan cusub lagu bilaabayo - BBC News Somali
Hillary oo baaritaan cusub lagu bilaabayo
8 Luulyo 2016
Image caption Hillary Clinton ayaa horay loogu dhaliilay isticmaalka emailka ay gaarka u leedahay
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa dib u bilaabaysa baaritaan ku aadan sidii Hillary Clinton ay u maaraysay xogihii sirta ahaa markii ay ahayd wasiiradda arrimaha dibadda.
Haweenaydan oo ay u badan tahay in ay noqoto murashaxa madaxwayne nimada ugu tartamaya xisbiga dimuqraadiga ayaa todobaadkan ogaatay in aan lagu soo oogaynin fal dambiyeed la xiriira in ay isticmaashay email ay gaar u leedahay.
Hay’adda sirdoonka dalka Maraykanka ee FBI ayaa sheegtay inkasta oo macluumaad xasaasi ah ay ku dirtay looguna soo diray email keeda gaarka ah haddana aysan jirin wax cadayn ah oo muujinaya in ay u qasaday arrintaas.
Baaritaankaas ayaa hadda dhamaaday, laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ayaa furaysa baaritaan kale oo ay dib ugu qiimaynayso wixii dhacay.
Xoghayihii arrimaha dibadda ee hore waxaa baaritaankan cusub ku wehelin doona gacanyarayaasheedii hore oo dhamaantood hadda ka tagay shaqadii ay ka hayeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka.